माधव नेपाल समूह सरकारमा जाने निश्चित भएको दाबी, भागवण्डामा के भयो सहमति ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
माधव नेपाल समूह सरकारमा जाने निश्चित भएको दाबी, भागवण्डामा के भयो सहमति ?
नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्ष पनि सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन्।
मंगलबार बिहान नेता नेपालसँग भेटेका प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुन उनी राजी भएको बताएका हुन्। स्थायी कमिटीका एक सदस्यले प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै भने, ‘नेपाल पनि सरकारमा सहभागी हुन राजी हुनुभएको छ।’ बुधबार बिहान सत्तापक्षीय गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालयको भागबन्डा हुने प्रचण्डले बताएका छन्। नेपालपक्ष कुन रुपमा सहभागी हुने त्यहीँ स्पष्ट हुने प्रचण्डले बताएका हुन्।
एमालेको एकता प्रक्रिया चलिरहेका बेला प्रचण्डलाई नेपालले सरकारमा सहभागी हुने बताएका हुन्। प्रदेश प्रमुख र अन्य नियुक्ति पनि नेपाल पक्षलाई समेट्ने तयारी गठबन्धनले गरेको छ। माओवादी स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार नेपाल समूहलाई कम्तीमा ६ मन्त्रालय, एक वा दुई प्रदेश प्रमुख र राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका निकायमा पनि भाग दिइनेछ ।
नेपाल समूहले चारवटासम्म राजदूत पनि पाउने भएको छ । आफूसँग भेटमा वरिष्ठ नेता नेपालले एमाले एकताको प्रयास पनि चलिरहने भन्दै आफूले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम दिने बताएको प्रचण्डले जानकारी दिएका छन् ।
विभिन्न नियुक्तीः सरकारले तीन प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई बर्खास्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश २, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखहरुलाई हटाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। अहिले प्रदेश २ मा राजेश अहिराज, गण्डकीमा सीताकुमारी पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशमा धर्मनाथ यादव प्रदेश प्रमुखमा छन्। उनीहरु क्रमशः २०७७ फागुन ७, २०७८ वैशाख २० र २०७६ कात्तिक १८ गते नियुक्त भएका थिए।
दुई साताअघि नयाँ सरकार गठन भएपछि सरकारले प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रयास गरेको हो। सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचन र गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीमान गुरुङलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । लुम्बिनीका प्रमुख धर्मनाथ यादव र गण्डकीका प्रमुख सीता पौडेललाई हटाएर सरकारले उनीहरुलाई नियुक्तीको सिफारिस गरेको हो ।
मंगलदबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको हो । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अर्थविद् विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन्। अर्थविद् पौडेललाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।